Haitung ဓာတုပစ္စည်း Co. , Ltd မှ - ဆက်သွယ်ရန်။
ဗီနိုင်း Acetate Monomer
ကုတ်အင်္ကျီ & Paint
20F Jinrong အဆောက်အအုံ, အရှေ့ Shengli ၏ str ။ ,
261041 Weifang အားရှန်ဒေါင်း
ညနေ6TO သို့မနက်9နာရီကနေရယူနိုင်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ကိုတစ်စုံတစ်ခုမေးမြန်းဖို့ hestiate မထားပါနဲ့။ တိုက်ရိုက်ကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေး chem@haitunggroup.com သို့မဟုတ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ပါ +86 536 2746720.
HAITUNG ဓာတု CO ။ , LTD မှ။
E-mail ကို: CHEM@HAITUNGGROUP.COM
E-mail ကို: EXPORT@HAITUNGGROUP.COM
ဖက်စ်: +86 536 8275045
ကျနော်တို့ Haitung ဓာတုပစ္စည်း Co. , Ltd ။ ကျန်းမာ, ချမ်းသာတဲ့နှစ်သစ် 2019 သင်နှင့်သင့်မိသားစုဆန္ဒရှိ!
ဗီနိုင်း Acetate Monomer Market ကဇမှ 4.6% + CAGR မှာကြီးထွားပါလိမ့်မယ် ...
"အာရှပစိဖိတ်ဗီနိုင်း acetate monomer စျေးကွက်အများအပြားစက်မှုလုပ်ငန်းဒေါင်လိုက်အတွက်တိုးမြှင့် application ကိုမှမရှိစေရန် 5.2% တစ် CAGR မှာကြီးထွားလာသည်။ " ဒီ key ကိုဗီနိုင်း acetate monomer (သင်တို့သည်) စျေးကွက်ကစားသမား Exxon Mobil Co. , ဖြစ်ကြသည် ...
အာရှ၏ဗီနိုင်း acetate monomer (သင်တို့သည်) စျေးကွက်ရေရှည် consumpti သော်လည်းယခုနှစ်အစောပိုင်းအစိတ်အပိုင်းအတွက်တရုတ်နိုင်ငံတွင်လျော့နည်းသွား output ကိုကြောင့်ထောက်ပံ့ရေးရှားပါးမှုထံမှထောက်ခံမှုအဖြစ်စက်ရုံအလုံးစုံစစ်ဆေးပြုပြင်ဖို့ရှာတွေ့မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ် ...